I-Tierra, ngu-Eloy Moreno: amandla wokuxhuma, ubulula kanye nokuvela | Izincwadi Zamanje
Ngo-2020, umbhali waseSpain u-Eloy Moreno wethule inoveli yakhe Umhlaba, indaba ekhuluma ngezelamani ezimbili nesithembiso sikayise kubo. Itulo lembula umhlaba obabazekayo ngemuva kwethelevishini nokuzijabulisa ohlelweni olubonwa emhlabeni wonke. Ekugcineni, umbhali usebenzisa ukulandisa okuphoqayo ukukhombisa ubudlelwano phakathi kwalezi zindaba zombili.
Abanye abagxeki bemibhalo bagqamise ubuqiniso obubonakalayo nezimpawu zesitayela senoveli zale noveli yesimanje. Futhi akuyona into engaphansi, izakhi ezifana nethelevishini noma amanethiwekhi omphakathi zinquma ekuthuthukiseni isakhiwo. Ngokwalesi sizathu, Umhlaba imele indlela ehlakaniphile yokusondela kumfundi esimweni esiyinkimbinkimbi nesiphikisanayo.
1 Amazwibela eTierra, ka-Eloy Moreno
1.1 Ukudlala kuqalisiwe
2.1 Incwadi emayelana nesikhathi samanje sobuntu
2.2 Umbhalo omnandi wokuzindla okujulile
3 Imibono mayelana nencwadi
4 Mayelana nomlobi, u-Eloy Moreno
4.2 Izincwadi zika-Eloy Moreno
Amazwibela we Umhlabangu-Eloy Moreno
Indoda enamandla amakhulu embonini yethelevishini nezikaqedisizungu yenza isithembiso esingajwayelekile ezinganeni zayo ezimbili ezisencane, UNelly no-Alan. Ngokuqondile, isiphakamiso ukuthi Uma laba bazalwane beqeda umdlalo, ubaba wabo uzofeza isifiso abasithanda kakhulu. Kodwa-ke, umdlalo uphazanyisiwe: ngokuphazima kweso kudlula iminyaka engamashumi amathathu, futhi ngazo kwenzeka izinguquko ezinkulu emndenini.
Umhlaba (Izinhlelo B)
Ya esemdala, uNelly ithola ibhokisi eliyimfihlakalo eliqukethe umakhalekhukhwini, indandatho nokhiye. Ngenxa yeselula, uphinde wahlangana nomfowabo (angakhulumanga naye) futhi izoqala kabusha umdlalo ongakaqedwa. Nakhu-ke ukuthi livela kanjani ithuba lokuthi umlingiswa ophambili afeze isifiso sakhe, ngoba u-Alan wayesekufezile kudala.
Ngasikhathi sinye, umdlalo uzoxhuma ne- engokoqobo umdlalo wethelevishini onomhlaba wonke onake ukuthuthuka kwawo. Lolu hlelo luzungeze abantu abayisishiyagalombili abasuka eMhlabeni baye eplanethi iMars. Khonamanjalo, e-Iceland, uNelly nomfowabo bafunda ukuveza amaqiniso ngesimo somuntu esiphikisanayo emhlabeni osengozini.
Le ncwadi ayikhulumi nje kuphela indaba exhumene nabanye, kodwa futhi uphakamisa isimo esivelayo esiqhubekayo mayelana neqiniso lamanje. Ngokunjalo, isitayela sokulandisa esakhiwe ezahlukweni ezimfushane ezinezindaba eziguqukayo sikhulisa ilukuluku labafundi mayelana nemicimbi ezokwenzeka ekhasini elilandelayo. Sebenzisa okungaphezulu kokuzuziwe injongo yakho gcina isibukeli siseceleni.
Ngokusobala, ukubheja kombhali ukwenza umfundi ajabulele ukutholakala okufakwe ezindabeni ezimbili ezimaphakathi zenoveli. Lokho kusho ukuthi, zombili lezi zelamani ezimbili ezithola isithembiso futhi zikhula zihlukane, kanye nalabo ababambe iqhaza ohlelweni lwethelevishini. Ekugcineni, kutholakala isizinda esivamile kuzo zonke lezo zimpilo.
Incwadi emayelana nesikhathi samanje sobuntu
Ngokombono wayo omusha futhi osesikhathini, Umhlaba Yincwadi enzima ukuyibeka phansi uma usuqale ukuyifunda. Kusukela kulesi sitayela esivuselelwe, U-Eloy Moreno uzama ukudalula isihloko ngamafomu okuxhumana abonakalayo emphakathini wekhulu le-XXI. Embhalweni, ukugxila kuwela esimweni somuntu, kubonwe kusukela esikhathini esimakwe yi-hyperconnection.
Ngaphezu kwalokho, izihloko eziningi ezinzima zibhekiswa ngokuxubana —Yokuqala kakhulu, ngasendleleni— isenzo esiqondile ngengxabano engagunci. Izihloko ezihlolwe zisukela ekulimaleni kwemvelo okwenziwe ngabantu emhlabeni, kuya esimweni sokuziphatha (ngokusobala) esenziwe kumanethiwekhi omphakathi.
Umbhalo omnandi wokuzindla okujulile
En Umhlaba, U-Eloy Moreno udalula indaba ekwaziyo ukudala ukuzibandakanya nokuvusa uzwela lwabafundi ngokungena nokuphuma okuningi - okumangazayo, ingxenye enkulu. Ngamunye wabo, ngesikhathi esithile, uba yinkinga ebalulekile. Njengoba ukwazi ukufunda ekhasini langemuva lale noveli, ufuna ukuthola iqiniso, kodwa, "inkinga yokufuna iqiniso ukulithola futhi ungazi ukuthi uzokwenzenjani ngalo."
Ngalezi zizathu, kunjalo incwadi ekumema ukuthi uthole izimpilo zangempela zabalingiswa, futhi, mhlawumbe ngethemba, umfundi uzindla ngezabo. Ngaleyo ndlela Umhlaba ngu-Eloy Moreno uzama ukusondeza abafundi engxenyeni eyinkimbinkimbi kunazo zonke yesimo somuntu.
Imibono mayelana nencwadi
Abagxeki bancoma ikhono lika-Eloy Moreno lokubamba intshisekelo yomfundi, yize umnyombo wenoveli uvezwa kusenesikhathi. Amanye amazwi, ngakolunye uhlangothi, akhuluma ngeokuhamba phambili elula ”, ngenxa yesakhiwo (esingesihle) sezentengiselwano sencwadi. Noma kunjalo, konke ukuhlolwa okuphathelene Umhlaba ziyiqiniso: amandla wokuxhuma, ubulula nokuqala.
Mayelana nomlobi, u-Eloy Moreno
U-Eloy Moreno ungunjiniyela wezobuchwepheshe kwezokuphatha i-informatics ezalwe ngoJanuwari 12, 1976 eCastelló de La Plana, emphakathini waseValencian, eSpain. Uphothule iziqu zeJaume I University edolobheni langakubo. Yize ephothule kancane waqala ukusebenza emkhakheni wamakhompiyutha, impilo yakhe inikelwe ezincwadini.
Ngo 2011, uthando lwakhe lwamholela ekutheni angene emhlabeni wezincwadi nge ukwethulwa kwencwadi yakhe yokuqala (ezishicilele), Ipeni lejeli eliluhlaza okotshani. Lo mbhalo waba yimpumelelo engalindelekile yombhalo, owasiza ukusabalalisa izincwadi zakhe ezalandela. Mhlawumbe, ukwamukelwa kwayo okukhulu emphakathini kungenxa yesitayela sayo sokubhala esingajwayelekile.
Ngemuva kwalokho ukushicilelwa kwe- ukuqala kwakhe, nokwamukelwa okuhle ngabafundi, U-Eloy Moreno uthathe umfutho omkhulu. Kusuka lapho, umbhali waseSpain akayekile umsebenzi wakhe wokubhala, ikakhulukazi izindaba namanoveli.
Ngakolunye uhlangothi, umbhali usedumile -Ngaphandle kobukhona bayo obuqinile ezinkundleni zokuxhumana— ngoba wakhe imizila yemibhalo. UMoreno, kabili noma kathathu ngonyaka, wenza ukuhambela abantu ezindaweni lapho ebeka khona amanoveli akhe. Ngaphezu kwalokhu, ufundisa izifundo zezincwadi nemihlangano yokufundisana, kanye nokubamba iqhaza njengejaji emincintiswaneni yokubhala ezweni lakhe.
Izincwadi zika-Eloy Moreno
Ngemuva kwalokho Ipeni lejeli eliluhlaza okotshani (2011), u-Eloy Moreno umphakathi Engikuthole ngaphansi kukasofa (2013), enye impumelelo yokushicilela ihunyushelwe ezilimini eziningana. Kamuva, umbhali waseCastellón ubuyele ekushicilelweni kwedeskithophu ukuyoshicilela Izindaba zokuqonda umhlaba (2015), lapho, yethula ingxenye yesibili neyesithathu, ngo-2016 nango-2018, ngokulandelana.
Okwamanje, uMoreno washicilela inoveli yakhe yesithathu ngo-2015, Isipho, lokho futhi kwaholela empumelelweni ngokushesha, yize kunguhlelo olulinganiselwe. Ngokufanayo, inoveli Ayibonakali (2018) ithole izibalo zokuthengisa ezinhle kakhulu. Hhayi ize, inezinguqulo eziyi-19 kuze kube manje nezinguqulo eziningana. Okwakamuva okuvela ku-Eloy Moreno kuyinto Umhlaba (2020).
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Tierra, ngu-Eloy Moreno